कोरोना बिरुद्ध पश्चिमाहरुको रोइकराई र नेपाल - Jhilko
चीनको बुहान शहरबाट सुरु भएको भनिएको कोरना भाइरसको संक्रमण आज बिश्वको करिब ३० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ । आफ्नो रुप फेर्न माहिर मानिएको यो भाइरस सुरुमा मानिसमा कसरी सर्याे र एक पछि अर्को मानिसमा कसरी सर्छ भन्ने कुरानै आजसम्म मेडिकल साइन्सले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
सन् २००२ र २००३ फैलिएको सार्स र मार्स भाइरसको पारिवारिक भाइरस मानिए पनि यसको स्वभाव थाहा पाउन र पत्ता लगाउन नसक्नु यस भाइरस बिरुद्ध लड्नको लागि ठुलो चुनौती देखिएको छ । कोरना भाइरसका कारण आजका मिति सम्म चीनमा करिब ७० हजार नागरिकहरु संक्रमणमा परेका छन भने करिब १९सयको आसपासमा त्यहाँका नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । केही लाख मानिसलाई उच्च सतर्कताका साथ राखिएको छ । चीन बाहेकका मुलुकहरुमा पनि करिब ५०० भन्दा धेरै मानिसहरु संक्रमित भेटिएका छन् भने फ्रान्स, फिलिपिन्स, हङकङ, जापानमा मर्नेको सङ्ख्या ४ पुगेको छ ।
आइसियु, सिसियुमा चाहिने इन्जेक्सनहरु सर्टेज र अत्यधिक महङ्गो बनाइएको छ । सरकार र सरोकारवाला निकाएको यसमा रत्तिभर ध्यान गएको देखिदैन । यदि केही गरी कोरोना भाइरस नेपालमा फैलियो भने त्यो बेला ५०० रुपैयाँमा पनि एउटा मास्क पाइने छैन । कोरोना भाइरस बिरुद्धको तयारीमा नेपाल सरकार, सरकारका प्रबत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जति हचुवा र सहज जवाफ दिइरहेका छन् तिनका जवाफहरु आम नेपालीले बिश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।
चीन अहिले कोरोना भाइरस बिरुद्ध निर्मम र अनिश्चित लडाइँ निरन्तर लडिरहेको छ । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चीनमा कोरोना भाइरसको तिब्रतामा २० प्रतिशतले कमि आएको छ । चीनलाई माया गर्ने देशहरूले चीनलाई कसरी सहयोग गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छन भने चीनलाई शत्रु ठान्ने पश्चिमा देशहरु उसलाई सिध्याने मौका यही हो भनेर चीनलाई हतोत्साहित गर्ने गरी मिडियाहरुमा रोइकराई गरिरहेका छन् । चीनको अकल्पनीय आर्थिक वृद्धि र समुन्नति पश्चिमाहरुको लागि सह्य हुने कुरा भएन । हामी नेपालीको हरेक सुख दुःखको साथी चीन यस्तो प्राकृतिक बिपत्तिमा पर्दा हाम्रो देश नेपाल र प्रत्येक नेपालीहरु चीन सरकार र त्याहाँका जनताले भोग्नु परेको बिपत्तिका बिरुद्ध सधैँ साथम छौँ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले जाहेर गरिरहेको छ । हामीलाई भुकम्पका बेला होस वा अन्य बिपत्तिका बेला चीन सरकार र चिनियाँ जनताले बिना स्वार्थ गरेको सहयोग नेपाली जनजताले कहिल्यै बर्सिएका छैनन् र बिर्सने पनि छैनन् ।
कोरना बिरुद्ध नेपाल
बिश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना माहामारीको भयावह अवस्था देखेर संसारैभरी आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ र सम्पूर्णं बिश्वका सदस्य राष्ट्रहरुलाई यसका बिरुद्ध लड्न तयार हुन र एकजुट भएर लड्न आग्रह गरिरहेको छ । नेपाल सरकारका स्वास्थ सचिव खगराज बरालको कुरा सुन्ने हो भने नेपालमा कोरना भाइरसको कुनै जोखिम नै छैन । सायद त्यही भएर होला कोरोना बिरुद्धको तयारी नेपालमा सुस्त र धिमे गतिमा भएको छ । नेपाल सरकारले केहीगरी कोरोना संक्रमित भेटिए भने देशभरका ३६ अस्पतालका १४७ बेडहरुमा राखेर उपचार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यदि नेपालमा कोरोनाका संक्रमित भेटिए भने यो १४७ बेड २÷३ दिनको अन्तरालमा भरिने छ र त्यस पछिका चुनौती सरकारले कसरी सामना गर्ला अनुमान लगाउन पनि मुस्किल छ । चीनमा अध्ययनका लागि गएका बिद्यार्थी र केही पर्यटक गरि करिब १७५ जना नागरिकलाई चीनको बुहान लागायत अन्य शहरबाट नेपाल ल्याउनु भन्दा बाहेक नेपाल सरकारले अन्य खासै तयारी गरेको देखिदैन ।
आज सम्पूर्ण बिश्व कोरना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । विकसित मुलुकहरु भावि बिपत्तिका बिरुद्ध कसरी लड्ने र आफ्ना नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर तल्लिन छन् । र त्यसका बिरुद्ध तयारीमा लागेका छन् भने हामी बिना तयारी ढुक्कसँग बसेका छौं । चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक र सबैभन्दा नजिकको मुलुक हो । हाम्रा धरै नाकाहरु छन् र ति नाकाहरुबाट आवतजावत हुने नै भयो । त्यहाँ राखिएका हेल्थ डेस्कहरुको बिश्वसनीयताका बारेमा आम नेपालीहरुले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् हवाई मार्ग होस वा दक्षिण तिरका सीमाना तिरको जोखिम होस्, उत्तिकै डरलाग्दो अवस्था छ । चीनसँग हाम्रो ब्यापारदेखि लिएर हरेक खालको सम्बन्ध छ । चीनमा दशौँ हजारको संख्यामा अझ पनि नेपाली छन् र चीनियाँ पर्यटकहरुको रोजाईको देश पनि नेपाल हो । कथम्कदाचित कोरोना नेपालमा फैलियो भने ठुलो र अकल्पनीय क्षति हुने निश्चित छ । नेपालमा कोरोनाको समस्या नआउँदै कालोबजारी हरुले मुखमा लगाउन मास्क सर्टेज गराएका छन् । राष्ट्रिय संकट र शोकमा कालोबजारी गरेर आनन्द लिनेहरु २ रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई २० रुपैयाँमा बेच्न थालेका छन् । बजारमा ज्वरो नाप्ने थर्माेमिटरको मुल्य पनि अत्यधिक बढाइएको छ ।
एउटा नेपालीलाई आपत पर्दा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज अर्काे नेपाली पाइलटले उडाउन तयार हुँदैन भने भोलि उपचार गर्ने डाक्टर तयार नहोला, अस्पतालले बेड दिन्न भन्ला त्यो अबस्थामा के गर्ने ? यसको जवाफ केही छैन । जहाज चालक र अस्पतालहरुका पनि आ आफ्नै पिडा छन् । आम मानिसको पनि कुझाई के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको राजकीय भ्रमणमा गएकाा बेला नेपाल एयरलाइन्स जो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हो, त्यसलाई नलगि हिमालय एयरलाइन्स लगेकाले रिस पोखेका पनि हुन सक्छन् । राज्य सञ्चालकले पनि राष्ट्रिय ध्वजाको महत्तव बुझेर ब्यवहार गरेको भए आज यो अबस्था पक्कै आउने थिएन कि ? यसतर्फ सरकार र सरोकारवाल निकायले बेलैमा सोच्ने बेला आएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
वीरगञ्जमा कोरोनाका विरुद्ध प्रहरी सक्रियता, वीरगञ्जको मस्जिदमा...
वीरगञ्जस्थित मस्जिदमा लुकेर बसेका १९ जमातीसहित २६ जनालाई आज प्रहरीले नियन्त्रणमा...
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट उक्त संयुक्त मञ्चमा ढकालले सरकारले गत महिना सम्पन्न...